Ama-aussiedoodles: Hlangana no-Einstein wezwe lezinja - Izinhlobo
Yini ongayithola uma uxube izinja ezimbili ezihlakaniphe kakhulu, nezithandeka kakhulu ezithanda abantu laphaya? I-Aussiedoodle ethandekayo!
Obeye aziwe njengo I-Aussie Poo noma I-Aussie Poodle , ukuxubana kwe-Australian Shepherd Poodle ukuxubana okuthokozisayo okutholile isicoco somunye wezidlwane zika- 'Einstein' zomhlaba we-canine. Ulungele ukufunda kabanzi? Hlala nathi futhi uqhubeke uskrola.
Nakhu okufanele ukwazi ngale nja ekhazimulayo
Ibukeka kanjani i-Aussiedoodle?
Isimo: Ingabe ama-Aussiedoodle ayizinja ezinhle zomndeni?
Nakhu ukuthi unakekela kanjani umngane wakho wase-Aussiepoo
Ingabe banezinkinga zempilo?
Ngifuna eyodwa! Ngiyithola kanjani i-Aussiedoodle?
Ama-Doodle amaningi wakho!
Izinzuzo nezingozi: Ingabe kufanele uthole i-Aussiedoodle?
I-Aussiedoodle ingenye yezinhlobo ezibizwa ngokuthi yi-designer ezahlala isikhathi eside ukwedlula indlela esazi ngayo, kepha abanye bathi zenziwa ngenhloso kusukela ngeminyaka yama-1990 eNyakatho Melika.
Uma ungumthandi wezinhlamvu ezixutshiwe, ungathola imidlwane enabazali bobabili njenge-Aussiedoodles, kepha abantu abaningi babheka imidlwane ye-F1 - ingxube ye-purebred Umalusi wase-Australia kanye ne-purebred Poodle .
Kodwa noma kunjalo, njengoba lokhu kungukuphambana, ama-Aussiepoos awakwazi ukubhaliswa ne-American Kennel Club (AKC).
Kuyinto enhle ukuthi kunezinhlangano eziqaphela izinhlobo ezixubekile njenge I-American Canine Hybrid Club (ACHC), i- I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC), ifayela le- I-International Designer Canine Registry (IDCR), kanye ne- I-Registry Breed Registry (DBR).
Manje yini ebenza babe yizinja ezinkulu kangaka? Le pooch iyinhlanganisela yezimfanelo ezinhle zabazali babo - amandla nokusebenza ngokuziphatha kwe-Aussie kanye nokuhlakanipha nokwethembeka kwePoodle.
Njengoba ubungalindela, inhlanganisela yase-Australia i-Shepherd Poodle ingazuza njengefa abazali bayo; ukubukeka, kepha akuhlali kungu-50/50.
Le fido inezindlebe ezinamehlo nezamehlo ezingaba ngumthunzi onsundu noma mnyama, kanti ezinye zingaba namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Imisila yawo ingaba mide futhi igobeke kancane njenge-Poodle, kepha futhi ingabanjwa futhi imfushane njenge-Australian Shepherd.
Usayizi: I-Aussiedoodle izobe inkulu kangakanani?
Ngokuvamile, abesilisa nabesifazane bacishe balingane. Banesisindo esimaphakathi se- Amakhilogremu angama-25 kuye kwangama-70 (11 kuya ku-32 kg) futhi cishe Amasentimitha ayishumi kuya kwangu-15 (Amasentimitha angama-25 kuye kwangama-38) ehlombe.
Ama-aussiedoodle anezinhlobo ezahlukene zosayizi. Lokho kungenxa yokuthi i-Aussie ingafakwa kunoma yibuphi ubukhulu bobukhulu bamaPoodle: ithoyizi , okuncane , noma okujwayelekile .
Abelusi abancane base-Australia bangasetshenziswa ukudala inguqulo encane. Kodwa-ke, abanye abalimi bahlose ukwenza ithoyizi noma amaphoyinti amancane ase-Aussie angaba nesisindo esingaphansi kwamakhilogremu angama-25 (11 kg) nangaphansi kwamasentimitha ayi-25 ubude .
Kunzima ukusho ukuthi bafinyelele nini ekukhuleni kwabo ngokugcwele kanye nesisindo. Indlela enhle yokwazi ukukhuluma nomfuyi wabo futhi ubone ukuthi abazali bangakanani usayizi.
Uma wamukela umdlwane futhi ungenayo indlela yokwazi, kufanele uzilungiselele isimanga.
Uma ukukhula komdlwane kwehla kakhulu ezinyangeni eziyisithupha ubudala, ungaqagela ukuthi mhlawumbe bazohlala baphakathi kuya kokuncane.
Kepha uma beshaya lelo phawu lezinyanga eziyisithupha futhi bengakhombisi zimpawu zokwehlisa ijubane, uthola okulingene nenja enkulu ezandleni zakho.
Ngenkathi noma ibuphi ubukhulu be-Aussie doodle bungahlala kunoma yiluphi uhlobo lwendlu, uma bevivinya umzimba ngokwanele, ukuhluka okuncane kuhle empilweni yasemafulethini ngoba bangakhipha amandla abo ezindaweni ezincane.
Ingabe ama-Aussiedoodles hypoallergenic?
Abanye abanikazi bathi ama-Aussiedoodles abo yi-hypoallergenic , kodwa ngeke uhlale uqinisekisa umdlwane ongachitheki uma omunye wabazali ekhipha. Lokho kusho, le hybrid ingaba okungekho ekuchitheni okuphansi .
Iningi lazo lingabahlaseli besizini abanengubo yangaphansi ewa phakathi entwasahlobo nasekwindla. Ngakho-ke uma unegciwane, ukuhlanganiswa kwe-Australian Shepherd Poodle kungahle kungabi yindlela engcono kakhulu kuwe.
Amajazi abo angaba yizinhlobonhlobo zokwakheka, kepha kunzima ukuqagela ukuthi uzothola ini uma uzala uhlobo olugobekile olugobekile ohlotsheni oluqondile oluboshwe.
Abanye banoboya obujiyile, obugobile, noma obuqondile . Ziza futhi ngemibala ehlukahlukene enjenge-red merle, i-blue merle, emnyama ne-tan (eyaziwa nangokuthi i-phantom), i-tricolor emnyama nebomvu, i-sable, i-parti, noma umbala oqinile ezimweni ezingavamile.
Yebo zikhona! Ngenkathi zingaba uhlobo lwe-Einstein, lezi zinja azesabi ukuzulazula, futhi lonke iphakethe lizojabulela ama-antics alo angenangqondo. Abanikazi babo bazichaza ngokuthi amahlaya adlalayo athanda ukuzijabulisa .
Ungabuka le vidiyo yama-Aussiedoodles amnandi futhi amnandi:
Bangakulethela isipho kuphela ukusichitha njengoba uselula bese ubaleka. Bathanda ukujahwa, ukujaha, nokudlala ukudonsisana.
Uma ufuna inja ehlala iqinile futhi izolile phansi, bheka kwenye indawo. Lezi zinja zikhona i-bouncy, i-boingy, i-jumpy entwasahlobo . Qaphela uma unocingo olufushane!
Akunandaba ukuthi benzani, baba w intuthwane ukuze ibe nabantu bayo . Ukuhamba? Letha i-Aussiedoodle yakho. Ukusebenza? Bayise ehhovisi. Ukuqokwa kukadokotela? Ngiyadlala! Noma, babezojoyina nawe uma ubavumela.
Okubi ukuthi lonke lolo thando luyakhungatheka lapho ungasekho, futhi umphumela ungaba njalo ukukhathazeka ngokwehlukana .
Uma ucabanga ukuthi i-Aussiepoo yakho izolala phansi, cabanga futhi. Bazofuna ukungabi embhedeni kuphela nawe, kodwa futhi balale emqamelweni wakho ngamakhanda abo (futhi kwesinye isikhathi abe yizinqe) ebusweni bakho.
Vele, ungabaqeqeshela ukulala kufayela le- ikesi noma elinye igumbi, kepha abakaze bajabule ukwedlula lapho benomuntu wabo abathandayo.
Banjalo izinja zomndeni eziphelele ngoba ziyaqikelela ngezingane futhi ngizosiza nokwelusa abancane bakho.
Vele, kufanele ngaso sonke isikhathi ufundise izingane ukuthi zisebenzisana kanjani nanoma iyiphi inja, futhi okuphambene nalokho, ikakhulukazi lapho isilwane sakho siyi-canine engathandeki.
Qaphela, noma kunjalo. I-Aussiedoodle enkudlwana ingangqongqoza enganeni uma ijabula kakhulu ngokuzungeza inani. Ngokuqinisekile uzofuna ukuqeqesha i-pooch yakho ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki.
Noma ngabe ufundisa inhlanganisela yakho yePoodle & Australian Shepherd ukukuvumela ukuthi uhambe ngezikhathi ezithile noma ukuthi uziphathe kanjani uma uzungeze izingane, ukhiye ukuhambisana.
Lokhu yi uhlobo oluhlakaniphile lokho okufuna ukukujabulisa, ngakho-ke okumele ukwenze nje ukumqinisekisa lapho enza okulungile.
Isibonelo, lapho uhamba, nikeza i-Aussiedoodle yakho umuthi futhi umvuze uma ezolile.
Lapho ubuya, yenza sengathi bekungeyona into enkulu ukuthi ubungekho. Ngemuva kwalokho, ngemuva kwesikhathi esithile, ungamnikeza ukwelashwa ngokuziphatha kahle.
Ezingxenyeni ezincane, unganikeza i-doggo yakho ukwelashwa lapho ehlonipha futhi ezolile. Khubaza ukuziphatha okuxekethile ngokumfundisa ukuhlala noma phansi uma enezingane.
Ngabe ama-Aussiedoodles akhonkotha kakhulu?
Hlangana noZiggy, iMini Aussiedoodle - Umthombo Wezithombe
Le ngxube ayithandi ukwenza ukukhonkotha okuningi , kepha njenganoma iyiphi inja, kuzoya ngokuthi bakhuliswe futhi baqeqeshwa kanjani.
Kepha ngenxa yomzali wayo wase-Aussie, okunye okukhathazayo kungaba i-Aussiedoodle yakho ezama ukwalusa ezinye izilwane ezifuywayo.
Basho kahle, kepha kungabacasula abantwana bakho abancane boboya, njengamakati.
Kepha ungakhathazeki, uma ingane yakho iphathwa futhi ifundiswa kahle, abazitholi zivikela noma zibe nolaka .
Kepha enye into enhle le ifido eliyizuze kumzali wayo wePoodle uthando lwabo lwamanzi nokubhukuda. Ubuntu babo abazenzi izilwane ezifuywayo ezimangalisayo kuphela, kodwa futhi ukwelashwa okuhle kakhulu noma izinja zensizakalo .
Ngokuya ngosayizi wabo, ama-Aussiedoodle anganikeza ngezinsizakalo zezempilo yengqondo njengokunciphisa umzabalazo wabantu abane-PTSD, ukukhathazeka, noma izinsizakalo zomzimba njengokubonwa usizo lwamehlo.
Ubuntu babo obuthokozayo bubenza babe baphelele ekuthokoziseni abantu ezibhedlela noma emakhaya okunakekelwa.
Noma ngabe le nja yomklami iyawathanda amanzi, lokho akusho ukuthi bangakwazi ukuphatha amanzi abandayo noma isimo sezulu esihle kakhulu. Awufuni ukuthi basale bodwa ngaphandle ngesikhathi sobusika. Ngaphandle kwalokho, ukuzilungisa kungaba lula, kuya ngejazi labo.
Ubuwazi ukuthi izinja ezingachithi zidinga ukusikwa nokuxubha okuningi? Ngakho-ke singasho ukuthi lesi siphambano asihambisani nokugcinwa okuphansi.
Yiba nesimiso se ukuxubha ingubo yakho yama-Aussiedoodles njalo ngosuku , futhi unciphisa njalo emavikini ayi-8 kuye kwayi-12.
Ngesikhathi sokuchitha, kungcono ukuxubha ijazi lakhe nsuku zonke ukuvimbela ukumila nokusiza ukukhipha ezinye zalezo zinwele ngoboya bazo.
Uma uletha i-pooch yakho ku-groomer, ungacela ukunqunywa kwezinwele okuhlukile - kusuka kuziqeshana ezimfushane, ezinama-buzz, ezinde, ezigelezayo, ukusikeka kwemvelo.
Le vidiyo inoMaximus onomkhwenyana okhokhelwayo okhombisa ukuthi ungayihlobisa kanjani noma uyisike kanjani i-Aussiedoodle:
Hlola izindlebe zabo okungenani kanye ngesonto bese usebenzisa i- Isixazululo ukuzihlanza nokuzomisa. Banuke izindlebe zabo bese bebheka ubomvu. Ufuna ukuqaphela izimpawu zokutheleleka ngamagciwane noma imvubelo - into amaPoodles alwa nayo.
Ngesikhathi sasehlobo, lapho utshani buya embewini, uzofuna ukuqinisekisa ukuthi uhlola ijazi labo, kanye naphakathi kwezinzwani zabo, izindlebe zabo, nemisila yabo ukuthola izinhloko zezinhlamvu.
Ufuna ikakhulukazi ukubuka ama-foxtail, angaba yingozi uma engena emzimbeni wenja.
Ngeshwa, ama-Aussiedoodles anohlobo lwejazi odonswa kulo izintambo - futhi angazifihla kalula!
Njengezinja eziningi, udinga ukusika izinzipho zabo kanye noma kabili ngenyanga . Uma uzwa lokho kuchofoza kokuchofoza ku-tile noma ku-hardwood, sekuyisikhathi sokunquma.
Udinga futhi ukubheka inhlanzeko yomlomo yenja yakho. Zonke izinja kufanele zihlanjululwe njalo amazinyo.
Kodwa-ke, amathoyizi noma ama-Aussiedoodle amancane adinga ukuxubha nsuku zonke. Izinja ezincane, ngokuvamile, zijwayele ukuba nezinkinga zezinsini nezamazinyo.
Uma kuyinselele ukukhuhla amazinyo wengane yakho, ungathola amathoyizi wamazinyo noma unamathele ukusiza kulo msebenzi.
Izingxube ze-Australian Shepherd Poodle izinja ezinamandla amakhulu . Udinga ukubanika Imizuzu engama-60 kuya kwengu-90 yomsebenzi ngosuku . Futhi, lokhu kuzoya ngosayizi we-Aussiedoodle yakho - izilwane ezifuywayo ezincane zidinga ukuzivocavoca umzimba okuncane.
Futhi badinga imisebenzi yangempela, futhi - hhayi nje ukuhamba ngobumnene ukuzungeza indawo yangakini. Futhi badinga ukubhukuda, ukugijima, ukugxuma, ukujaha, ukulanda, nokudlala.
Ufuna nokugcina i-Aussiedoodle isebenzise ngokwengqondo. Ama-canine ahlakaniphile azohlala ethola okuthile okumele akwenze uma ungawaniki umsebenzi - futhi ungahle ungakuthandi abakhetha ukukwenza!
Uma kukhulunywa ngesikhathi sokudla, ama-Aussiedoodle anjalo othambekele ekutholeni isisindo , ngakho ungabanqobi ngokweqile. Nciphisa ukuphatha futhi ube nohlelo olujwayelekile. Lokhu kungasiza ukukhawulela noma yikuphi ukuthambekela kokudla okukhethiwe.
Bondle nge-kibble eyomile esezingeni eliphakeme nenyama njengesithako sokuqala sokuzigcina ziphilile. Inani lokudla nohlobo lokudla abakudlayo kufanele kususelwe eminyakeni yabo, ubukhulu, izinga lomsebenzi, kanye nempilo.
Ngokwesilinganiso, i-Aussiedoodle ingadla Izinkomishi ezi-2 ukuya kwezi-3 zokudla kwezinja ngosuku , futhi kufanele ihlukaniswe kabili.
Zonke izinja zinezinkinga zempilo, kepha ama-Aussiedoodle anezimbalwa kunezinye izinja. Ngenhlanhla nokunakekelwa okufanele, umngane wakho othandekayo angajabulela i- isikhathi seminyaka eyi-10 ukuya kwengu-12 .
Kunezinkinga ezimbalwa zezempilo ongathanda ukuziqapha, kufaka phakathi i-hip dysplasia, i-retritis atrophy, ukuzwela kwe-ivermectin , namakhathakhatha.
Sincoma ukuthi u-pal wakho onoboya avakashele udokotela wezilwane okungenani kanye ngonyaka, noma ngabe uyayithanda noma cha.
Uma usukulungele ukuletha i-Aussiedoodle ekhangayo ekhaya, kuwumqondo omuhle ukubheka ukwamukela kuqala, ikakhulukazi ngoba izinhlobo eziningi ezixubekile zigcina sezikhosele.
Uma uthatha isinqumo sokuthenga, qiniseka ukuthi ubhekene ne- umfuyi ohlonishwayo .
Noma yimuphi umfuyi ongakuvumeli ukuthi uvakashele unenkinobho ye-PayPal kuwebhusayithi yakhe noma unenqwaba kadoti ngonyaka, kufanele kugwenywe.
Lokhu nje ezinye zezimpawu yabazalisi bezindlu ezingemuva noma labo abathola imidlwane yabo emashinini emidlwane.
Kufanele futhi uqaphele ababelethi abanezinhlobo eziningi ezahlukahlukene ezitholakala zonke ngasikhathi sinye. Bheka nokubuyekezwa kwabo.
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukubheka ukuhlengwa kwasendaweni njengeHumane Society ukubona ukuthi ngabe kukhona yini ama-Aussiedoodles aphelele lapho.
Uma usuvele uxhumene nabatakuli bendawo futhi wabuza nganoma yiziphi izinja ezifuna amakhaya, kepha ufuna ezinye izinketho, lapho ungabhekabheka lawa mawebhusayithi:
Inombolo yosizo ye-Aussie Rescue and Placement (ISt. George, UT)
I-Aussie Rescue yaseMinnesota (U-Elk River, MN)
Ukutakulwa KweCarolina Poodle (UPacolet, SC)
Ukutakulwa KwePoodle eHouston (IHouston, TX)
Ama-Aussiedoodles aseNyakatho-ntshonalanga (Malad City, ID)
Khumbula ukuthi asikhuthazi noma yibaphi abalimi, futhi kufanele nakanjani yenza ucwaningo lwakho ngaphambi kokukhetha okukodwa .
Inja eshibhile ingahle ibonakale iyinto enhle, kepha izinkinga zokuziphatha nezingokomzimba ongase ubhekane nazo zizobiza kakhulu (futhi zibuhlungu) ngokuhamba kwesikhathi.
Uma uthatha isinqumo sokuthenga umdlwane wase-Aussiedoodle, udoti ungaba nemidlwane engu-6 kuye kwayi-7, kanti ngayinye inenani $ 800 kuya phezulu .
Izindleko ze-furball ngayinye zizothinteka ngosayizi, umbala wejazi, kanye nokwenziwa kwe-Aussiepoo onentshisekelo kuyo. Ezinye zingabiza njenge- $ 10,000!
Nawa abanye abalimi be-Aussiepoo ongawahlola:
Crockett Doodles (IGreenville, SC)
ICottonwood Creek Doodles (ISalt Lake City, UT)
Ama-Doodles ama-Double R (I-Stonefort, IL)
I-Sunny Ridge Doodles (I-Temecula, CA)
Ezinye izinsizakusebenza ezivelele kakhulu zomfuyi zifaka phakathi Ikhofi elinobisi (Reno, NV) kanye PuppySpot . Ungahlola uhlu lwendawo ku-CraigsList, ku-Facebook, noma emaphephandabeni, lapho ungathola khona abalimi abathile.
Kuyaqondakala uma ucabanga ukuthi i-Aussiedoodle ayisiwo umdlalo omuhle kuwe. Ayikho inkinga! Kukhona amanye ama-Doodle nama-Poos ambalwa ongafuna ukucabanga ngawo.
Zingaba nokufana ngosayizi nobumnene, kepha zingaba nezingubo ezahlukahlukene, ukuqeqeshwa, nezidingo zokunakekelwa.
Umabhebhana (Umxube weLabrador Retriever nePoodle)
I-Goldendoodle (Umxube weGolden Retriever nePoodle)
I-Bordoodle (Umngcele weBorder Collie nePoodle)
Imvu yezimvu (Old English Sheepdog and Poodle mix)
I-Bernedoodle (Inhlanganisela yaseBernese Mountain ne-Poodle)
ICavapoo (Cavalier King Charles Spaniel kanye nePoodle mix)
I-Cockapoo (I-Cocker Spaniel ne-Poodle mix)
Lokho kungaba kuwe nendlela ophila ngayo. Ngabe i-Aussiedoodle izwakala njengohlobo lwenja ongayengeza emndenini wakho? Ubuntu babo nokuthandwa kwabo kubenza babe nzima kakhulu ukumelana nabo.
Ngokugunda izinwele okulungile, lezi zinja zivame ukubukeka njengamabhere ama-teddy amakhulu, kodwa ungakhohliswa.
Banjalo uhlakaniphile futhi ugcwele amandla ajabule . Lezi akuzona izinja ezizofuna ukuzipholela kusofa usuku lonke.
Esikhundleni salokho, bafuna ukuhamba izintaba, ukubhukuda, ukuhamba, ukudlala, nokulanda nabantu ababathandayo.
Akunandaba ukuthi ubayisa kuphi, cishe uzothola amathani abantu abafuna ukudlala futhi bazitotobele ngalezi zingcwecwe eziphumayo.
Kumele futhi ucabange ukuthi yize bengabahlaseli besizini, badinga ukunakekelwa nokunakwa okuningi.
Kepha uma lokhu kuqhekeka kukuthola ngezimpawu zakho - bayasebenza, bahlakaniphile, bayashesha ukwakha izibopho eziqinile nabantu babo , futhi zigcwele uthando olungapheli - zingamunye okufanele uzicabangele.
Ucabangani nge-Aussiedoodle? Sazise imicabango yakho ngokushiya amazwana ngezansi.
Ukubuka konke kwe-Whoodle Dog Breed: Ukubukeka, Abafuyi, Usayizi, Intengo Nezinja
shih tzu ithoyizi poodle mix
usayizi wokuxuba we-labrador german
uyini umalusi wase shilo oxutshwe
impisi uhhafu inja umalusi waseJalimane inja
injani inja ye-cockapoo